निर्वाचन आयोगलाई महाभारत, निर्णयबिहीन बन्यो « Lokpath
२०७७, ८ माघ बिहीवार ०८:१५
निर्वाचन आयोगलाई महाभारत, निर्णयबिहीन बन्यो
प्रकाशित मिति : २०७७, ८ माघ बिहीवार ०८:१५
नेकपाको दुबै पक्षले पार्टीमा गरेको हेरफेरको विवरण अद्यावधिकका लागि दिएको निवेदनउपर आयोगले अझैसम्म केही निर्णय लिएको छैन । आयोगले पुस २३ गते दुबै पक्षलाई ७ दिनको समय दिएर थप स्पष्टताको लागि पत्र पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले पुस २९ मा आयोगलाई जबाफ पठाएका थिए । आयोगलाई पठाएको जबाफमा दुबै पक्षले आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेको निर्णय वैधानिक रहेको दावी गरेका छन् ।
दुबैले आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन मागदावी गरेका छन् । दुबै पक्षबाट जबाफ आएको साता नाघिसकेपनि आयोगले निर्णय गर्न नसकेको खबर कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
अब कारोबारमा यी १६ वटा परिसूचक गणना
काठमाडौँ । आइतबारदेखिको कारोबारमा १६ वटा परिसूचक गणना हुने भएको छ । नेपाल
छुट्याइँदै गाउँ र सहर
काठमाडौं । हाम्रा देशमा कति गाउँ छन् ? सहर कति छन् ? स्थानीय
‘केपी ओलीमा वैचारिक स्खलन भइसकेकाले तत्काल एकता असम्भव’
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै नेपाल : गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउन निकै…